Dhageyso:-Cawad oo faah faahiyey wada-hadalladii uu la yeeshay dhiggiisa Kenya | SMC
Home WARARKA MAANTA Dhageyso:-Cawad oo faah faahiyey wada-hadalladii uu la yeeshay dhiggiisa Kenya
Dhageyso:-Cawad oo faah faahiyey wada-hadalladii uu la yeeshay dhiggiisa Kenya
Wasiirka Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga, Mudane Danjire Axmed Ciise Cawad ayaa maanta wadahadal kula yeeshay Nairobi dhiggiisa dalka Kenya, Marwo Raychelle Omamo,waxaana Wasiirka uu faha faahin ka bixiyey wayaabihii ay ka wada hadleen.
Wasiir Cawad oo la hadlay Idaacadda Voa-da ayaa sheegay inay ka wada hadleen labada dhinac sidii loo dhameyn lahaa khilaafka labada dowladood iyo sidii loo sii xoojin lahaa xiriirka labada dowladood.
Waxaa Wasiirka wax laga weeydiiyey in dhowr mar ay wada hadallo yeesheen Madaxda labada dowladood,hayeeshee uusan dhaqan gelin heshiis ay wada gaareen,waxaana uu sheegay in labada dhinac ay dadaalayaan uuna rajeynayo in heshiiskaan la dhaqan geliyo.
Ugu dambeyn waxaa uu Wasiirka Arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad uu beeniyey Warar soo baxayay oo sheegayay in wada-hadalladaan ay cadaadis kus aareen Soomaaliya dowladaha Mareykanka iyo Itoobiya,waxaana uu sheegay in Soomaaliya ay tahay xur,isla markaana wada-hadalkaan uu ka yimid dhinaca Madaxweyne Farmaajo si loo badbaadiyo Shacabka Magaalooyinka Beled-Xaawo iyo Mandheera maadaama dagaalkii halkaasi ka dhacay uu khilaafka xoojiyey.
Dowladda Kenya ayaa dhawaan waxaa ay Muqdisho u soo dirtey Wafdi Wakiil ka ah Madaxweynaha dalkaas,iyaga oo kulamo la qaatey Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Previous articleDHAGEYSO:-Maxaa ka jira in Itoobiya Joojisay Saamigii ay ku lahayd Dekedda Berbera iyo S.land oo ka hadashay
Next articleDagaal dhex-marey Ciidanka Dowladda & Al-Shabaab